Kusukela ukubukeka kwalo kuncike kakhulu. Uma ubona umuntu okokuqala, okokuqala banake isitayela ukugqoka, ukuzilungisa, kwekhanda umngane omusha. Phela, njengoba besho, ukuhlangabezana izingubo. Kahle ekhethiwe image - lona ukhiye segolide yokuphumelela umsebenzi okhokhelwayo futhi ekuphileni kwansuku zonke, ngakho-ke kufanele banikwe isikhathi esiningi. Uba kanjani yimpumelelo futhi ekhangayo? Ake sicabangele ndawonye kulesi sihloko.
Ukubona i-indoda ziphoqa - kuyinto, okokuqala izinto fancy. Funda mayelana ukuthambekela zakamuva izingubo kungaba kusuka ezihlukahlukene omagazini, namabhulogi yalezi imifanekiso isitayela. Futhi iyini sithombe? Asiqale ukuthuthukisa ukubukeka kwabo siqu ngokuchaza umqondo, okuyokwenza ukuba uqaphele okushiwo eside. Ngakho, umfanekiso - umbono othile umuntu, inkampani, ejensi nokunye, ukwakha ezingqondweni umphakathi ezizungezile esebenzisa ulwazi ngendaba izindlela enokwehla (observation, ukuhlaziywa, nokunye).
Kulesi mqondo, ngasendleleni, akusiyo kuphela ukubukeka, yize ke ifeza indima ebaluleke kakhulu. ukushiya isithombe esihle kumuntu ngokwakhe, ungakwazi ushiye kwenzeka ukuthi Uzokwethula ngokwabo ngokuqiniseka, lalelisisa interlocutor, ukumamatheka, ukwenza ukuba nginconywe ngomusa umlingani wakhe. Zonke lezi imininingwane sihlanganise akha isithombe.
Noma kunjalo, abantu abaningi bakholelwa ukuthi isithombe - okokuqala ukubukeka. Leli gama kuhlangene ngokungenakuhlukaniswa welithi "isitayela", uma kuziwa ngempumelelo ukukhetha izingubo, izimonyo futhi kwekhanda. Ngakho izinto kufanele agqoke kusayithi. Ngokwesibonelo, ngempela akufanele ukuza ehhovisi endaweni miniskirt kanye nightclub - ibhulukwe lwavutha. A ekhethwe kahle ikhabethe izinto - okucacile zizwakale kahle noma cha. Kunesimo esifanayo nge izicathulo. Kukhona izinto nje alikwazi ezigugile ngaphandle izicathulo izithende zakhe: ngezansi isiketi nje kwamadolo, ukunqampunwa ibhulukwe. Kodwa kukhona labo bengakwamukeli ne izikhonkwane - amatreksudi, sweatshirts.
ekudalweni Image - lena umsebenzi obaluleke kakhulu, lapho umsebenzi kuwufanele ngempela. Emphakathini, wena zizohlolwa ngokuyinhloko "ikhava", ngakho-ke kufanele singabi nasici. Uma ungeke ukwazi ukudala isitayela sakho siqu, udinga onguchwepheshe kule ndawo - isithombe-umenzi. Abantu yalesi mkhakha umuzwa ecashile zokunambitha, okuyokwenza ukuba sithathe i ikhabethe imfashini.
Uma ufuna ukwenza umsebenzi wokuziphilisa omuhle, wenze isithombe esihle kothile ezingaba umhlahlandlela kuzosiza umfanekiso omuhle. Beauty and ezingokwenyama nezingokomoya - yilokho abaphathi enkulu balinde. Ngakho kufanele kukhanye ukuzethemba, ngobugagu nolwazi olujulile emsebenzini wabo.
Ngakho, umfanekiso - akusiyo kuphela ukuphelela zangaphandle okungukuthi izingubo ezisesitayeleni futhi imfashini, is kahle ngokuhlanganiswa izicathulo, izesekeli kanye kwekhanda, kodwa ngendlela yokuxhumana, charm, ehlakaniphile, futhi ikhono sinqobe interlocutor. Uma konke lokhu kuyiqiniso kini, khona-ke nakanjani niyoba yimpumelelo futhi likufuna uchwepheshe!
Andrei Petrov - Biography futhi ukuphila komuntu TV umethuli